BAREFOOT...!!!: कर्नाली रिलोडेड : फोटो फिचर
कर्नाली रिलोडेड : फोटो फिचर
यो पटक संयोगले जुम्ला फेरी घुमेर आउने साइत जुर्यो । जान मन पहिलेदेखि नै हो, कहिले के नमिल्ने कहिले के । त्यहाँ पुग्दा लामो समयपछि घर फर्किएझैं भयो । सबै कुरा उस्तै छन्, केही फेरिएका भौतिक संरचना बाहेक ।
जुम्ला बस्न छोडेको ३ बर्षपछि जुम्ला पुग्दा पाएको आत्मीयताले गद्गद् छु, मैले सबैले बिर्से होलान् भन्ठानेको थिएं, होइन रहेछ । बरु मैले धेरैलाई बिर्सिएछु, उनीहरुले बिर्सेनछन् । मसँगै जाने साथीहरुले तपाईंलाई त यहीं काम गर्ने जस्तो गर्छन् त भनेर जोक पनि गरे । जे होस् यो पटकको यात्राले मैले त्यो ठाउँको लागि केही गरेको रहेछु, नबिझाइ बसेको रहेछु भन्ने भान भयो ।
Jumla : Frm the Plane!!
त्यो ठाउँमा म ४० महिना बसें । जाँदा संकटकाल थियो, फर्कँदा शान्ति । जाँदा एक महिनामा एक पटक घरमा फोन गर्न पाइन्थ्यो, आउँदा सबैको हातमा दुई दुई वटा मोबाइल । जाँदा चामल सबसे बहुमुल्य चीज थियो आउने बेला सुलभ । जाँदा सडक हिंड्न प्रयोग हुन्थे, आउँदा रुटका जीप चल्न थालेका थिए । जाँदा इन्टरनेट के हो कमैलाई थाहा थियो, आउँदा Dial-up चल्ने भएको थियो । यी सबै कुराका बीचमा साह्रै संकटका बीच काटेका संकटकालको समय र ६२-६३को आन्दोलन अझै ताजा छन् । सबैभन्दा ठुलो कुरा कर्नाली जाँदा म १९ बर्षको अल्लारे Angry Young Man थिएं तर आउँदा सम्हालिन जानेको एउटा नअत्तालिने मानिस भएर फर्कें । त्यो ठाउँले मलाई आपतमा बाँच्न सिकायो र अभाबमा हांस्न । काठमाडौं बसेर फेसबुकमा सगरमाथाको फोटो ट्याग गर्दै मैले देश देखेको छु भन्ने पुस्ताका बीचमा बसेर पनि मैले त्यो पीडा र दु:ख भुलेको छैन र भुल्ने पनि छैन । म गर्बसाथ भन्न सक्छु मैले तीनै दुखीहरुका बीचमा ४० महिनाको दु:ख काटें, नडराइ र कसैलाई नगुहारी । फर्केर जाँदा पाएको यो स्नेहले ती दिन सम्झेर म थप भाबुक भएं ।
Looks Delicious : :)
जुम्ली मार्सिको भात र सीमीको दाल
हुन त धेरै कुरा फेरिएछन्, नीला नीला NGo का बोर्डले अझै बजार ढाकेछन्, जुम्ला बसपार्कबाट बस चल्न थालेछ । बुङबुङ्ती धुलो उडाउँदै १८० रुपैया लिटरको तेल हालेर भट्भटे चढ्ने पनि धेरै भएछन् । अभाबको नमूना बनेको जुम्ला अस्पताल "कर्णाली अञ्चल अस्पताल" भएछ, चिटिक्क परेका नयाँ भबनहरु थपेर । सिमेन्ट प्लास्टर गरेर घर बनाउने हरु बढेछन्, धेरैजसो द्वन्दकालमा क्रान्तिका लागि भत्काइएका सरकारी भवनहरु नयाँ र राम्रा बनेछन् । बिजुली पहिले भन्दा नियमीत भएछ । बलसिङ भाईले तीन तले घर बनाएछ, हिमाली दिदीले घरमा तला थपिछन् । राजदेबको मिठाइ पसलको साइज बढेर ठुलो भएछ । म छँदा बजार बजार डुलेर दारु खाएर हल्ला गर्ने केटाहरु बिहाबारी गरीवरी जिम्मेवार भएछन् । पहिले एउटा मात्रै FM रेडियो रहेको ठाउँमा अर्को एउटा रेडियो थपिएछ । बेस्कन हुरी आए उडाउला जस्तो घरमा बस्ने जुम्लाका नेता दीन्बन्धु श्रेष्ठले नयाँ पक्की घर बनाएछन् । लोकल रक्सीका अनगिन्ती भट्टिको ठाउँ नयाँ खोलिएका आयातित मदिरा स्टोरले लिएछन् । जुम्ला प्रशासन कार्यलय अगाडिको मिठो चिया पाइने पसल त रेस्टुरेन्ट बनेछ, कप प्लेटमा चिया बेच्नेगरी । जुम्ला बजारको सडक पीच हुन थालेछ, ढल सहित । कर्णाली प्राबिधिक शिक्षालय सम्म नै सडक बनेछ । रुप फेरिएको छ जुम्लाको, माटाको छानो मात्र देखिने गाउँ गाउँ सम्म जस्ताको छाना टल्किन थालेछन् । हेर्दा रमाइलो लाग्यो, संकटकालका ती दु:खका दिनमा कस्ले पो कल्पना गरेको थियो होला र यस्तो पनि दिन आउला भनेर ।
The Karnali Express!!
धेरै कुरा उस्तै पनि छन्, अली केही भयो कि नाराजुलुस गर्ने बानी गएको रहेनछ, अस्ती भर्खरै अस्पतालका डाक्टरहरुलाई अभद्र व्यबहार गरेछन् । लथालिङ्ग जुम्ला बिमानस्थल झनै लथालिङ्ग भएछ । पानी झनै फोहोर आउन थालेछ । खाजा पहिले जस्तो पाइन्थ्यो त्यस्तै पाइने रहेछ । सरिता दिदीको मेडिकल र नबराज शाहीको पसल पनि उस्तै । "मानसरोबर रेस्टुरेन्ट र त्यहाँको फ्राइड सेकुवा पनि उस्तै । पत्रिका भोली मात्रै पाइने चलन पनि उस्तै । रेडियो कर्णाली जस्ताको तस्तै रहेछ । एअरपोर्ट गएर दिनभरी कुरेर प्लेन नपाई फर्किने काम झनै बढेछ । द्वन्दका बेला भत्काइएका केही भवन अझै उस्तै रहेछन् । धेरै दु:ख धेरै पीडा अझै उस्तै ।
म जांदा नै ठुलो केही अपेक्षा त थिएन, तैपनी हेरेर आउन चाँही मन थियो । कथा लेख्ने जस्तो केही गरिन मैले यसपटक, बसें, अली अली घुमें, त्यहाँ बस्दा भात चिया पकाएर खुवाउने या कुनै रुपले चिनिएका सबैलाई सकेसम्म भेटें । "कैलाश होटेल"का भाईले रातो मार्सी चामलको भात र सीमीको दाल खुबै स्वादिलो पकाएर ख्वाए । फर्केर आउँदा केही भर्खर पाक्न लागेका चक्लेटी स्याउ, केही स्याउका चाना, केही ओखर बोकेर आएँ, ती सँगै एउटा आत्मीय मिठो याद पनि । फेरी जाँदा अझै बिकास होस् । झलमल्ल देख्न पाइयोस्, त्यही कामना । (बाँकी तस्बिरमा...................................................
नेपालगन्ज एअरपोर्टको भद्रगोल
Karnali Highway Frm the Air
The Torn Welcome! :)
And The Kailash Hotel!
Two TVs in the room!! :)
रेडियो कर्नाली एफ एम
जुम्लामा ब्युटी पार्लर
हिमाली दिदिको घर
कर्णाली अञ्चल अस्पताल
चाउचाउको खोल को खेल
ब्यापार १ रुप्पेका तिन दाना
कर्णाली प्राबिधिक शिक्षालय जाने बाटो
Hydro Dam at Jumla!!
The Hydro Project at Jumla!!
अर्की स्याउ पसल्नी
४ घण्टा जती कुरियो प्लेन
मेरो बिहा भाको छैन भनेको यी बाजेले मरिगए पत्त्याएनन्
भद्रगोल एअरपोर्ट जुम्लाको, यात्रु भन्दा गफिने धेरै
Bye Bye Jumla!!
Reading Yogesh Raj on the Plane!!
Pepsi hasagift hamper inside the bottle at Nepalgunj!!
१) कर्णालीको सम्झना : भाग १
२) कर्णालीको सम्झना : भाग २
३) कर्णालीको सम्झना : भाग ३
Labels: Jumla, Karnali, Nepal, Pictures